သားသမီး ရတနာ | Sanchaung Journal
ပြက္ခဒိန်တွေကို ပြန်လှန်ကြည့်လိုက်တော့ – တောင်ကိုးရီးယား နိုင်ငံသည် စီးပွားရေး တိုးတက်အောင် အရှိန်အဟုန်နဲ့ကျိုးစားခဲ့၇တယ်။ စီးပွားရေးမှာ ရှေ့ ဆုံးကပြေးနေတဲ့ ဂျပန် ကို အမှီလိုက်ဖို့ ကျိုးစားခဲ့တာ အောင်မြင်မှုတွေ ရရှိခဲ့ပေမယ့် ကလေး မွေးဖွားမှု ကျဆင်းသွားခဲ့ပါတယ်။
ကလေး မွေးဖွားမှု ကျဆင်းတော့ ဘာဖြစ်မှာလဲ။
နောက်မကြာခင်မှာ တိုင်းပြည်ထဲမှာ အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ လူနည်းပြီး သက်ကြီးရွယ်အိုတွေများလာပါလိမ့်မယ်။
အလုပ်မလုပ်နိုင်တဲ့ သက်ကြီးရွယ်အိုနဲ့ အလုပ်လုပ်နိုင်တဲ့ လူငယ် အချိုးအစားမမျှတော့ပါဘူး။ ဒီတော့ တိုင်းပြည်မှာ ကုန်ထုတ်လုပ်အား ကျဆင်းလာလိမ့်မယ်။ အလုပ်လုပ်မယ့်သူမရှိတော့ နိုင်ငံခြားသားတွေ ခေါ်သွင်းရလိမ့်မယ်။ ဒါတွေဟာ တဖြည်းဖြည်းနဲ့ရုပ်လုံးပေါ်လာမယ့် ပန်းချီကားချပ်တစ်ခုလိုပါပဲ။
ဒီလို ပြဿာနာကို ကိုးရီးယားနိုင်ငံ ၊ ထိုင်ဝမ် နဲ့ဂျပန် နိုင်ငံ၊ စင်္ကာပူ နိုင်ငံ တွေမှာ တွေ့ နေရပါပြီ။
ဒီနိုင်ငံတွေရဲ့ မိသားစုတစ်ခုစီမှာ သားသမီး တစ်ဦးလောက်ပဲ ယူထားပြီး နောက်ထပ် ကလေး ယူဖို့တော်တော် စဉ်းစားနေရပါတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ လေ့လာဆန်းစစ်တဲ့အခါ – အမျိုးသမီးတွေဟာ သားသမီးကို ကျွေးမွေး စောင့်ေ၇ှာက်ကိစ္စ၊ အိမ်ကိစ္စ အစရှိတာတွေနဲ့ဗျာများနေရတဲ့အထဲ လုပ်ငန်းခွင်ထဲလည်း ၀င်ရသေးတယ်။ အမျိုးသမီးတွေ အလုပ်တဖက်နဲ့အိမ်ထောင့်တာဝန်ထမ်းရတဲ့ အချက်က သားသမီးနည်နည်းယူနေရတဲ့ အဓိကအချက်ပါပဲ။
နိုင်ငံအကြီးအကဲတွေကလည်း ဒီပြဿနာကို နည်းအမျိုးမျိုးနဲ့ ဖြေရှင်းနေတာပါပဲ။ အခုဆို
အမျိုးသမီးတွေကို ဦးစားပေး တန်ဖိုးထားဖို့လှု့ ဆော်တိုက်တွန်းနေပါတယ်။
အိမ်ထောင်ရှင် တွေကို ခွင့်ရက်တွေပိုပေးတယ်၊ (အဖေ၊ အမေ – ၂ယောက်စလုံးကို ပေးတာပါ။ maternity leave ဆိုတာရှိသလို ၊ paternity leave ဆိုတာ လည်း ရှိလာပါပြီ။)။
အိမ်ထောင်ရှိသူတွေကို အခွန်တွေ လျှော့ပေးတယ်။
ဒါပေမယ့်လည်း နိုင်ငံခေါင်းဆောင်က အစ၊ လမ်းလျှောက်နေတဲ့လူ အထိ ပညာခေတ် ၊ နည်းပညာခေတ် လို့အော်နေတော့- ကလေး တစ်ယောက်ရဲ့ ပညာသင်စရိတ်က မိဘတွေအတွက် ကြီးမားတဲ့ ၀န်ထုပ်ဝန်ပိုးဖြစ်နေစဲပါပဲ။
“ကဲကဲ ရှင်မရေ အလုပ်မလုပ်နဲ့ တော့ ၊ သားသမီးကိစ္စ ၊ အိမ်ကိစ္စပဲ တာဝန်ယူတော့လို့” ပြောရအောင်။ လင်ယောကျာင်္းရဲ့ ၀င်ငွေက တအားကောင်းနေလို့ လား။ တိုးတတ်နေတဲ့ နိုင်ငံတွေမှာ ပညာသင်ကြားစရိတ်ကလည်း ထိုးတက်နေတော့ – မေးခွန်းတွေထပ်ထွက်လာရော – တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်း ၀င်ငွေနဲ့ဒီအိမ်၊ ဒီသားသမီးတွေကို ကျွေမွေး၊ပညာသင်ပေးနိုင်မှာလား။
ဒီလိုသတင်းတွေ ဖတ်မိတော့ ကျွန်တော်တို့အဖိုးအဖွားတွေ ခေတ်တုန်းက အိမ်ထောင်စုတစ်ခုမှာ ၅ ယောက် ကနေ ၁၀ ယောက်အထိရှိခဲ့တယ်၊ အားလုံး သိုက်သိုက်ဝန်းဝန်း၊ ၀၀ ဖြိုးဖြိူးနဲ့ ပါပဲ။ အိမ်ဝိုင်းဆို အကျယ်ကြီး ။ အဖွားက အဖိုး ရှာဖွေ ကျိုးစားတဲ့ စီပွားကို မပျောက်မပျက်အောင် ထိမ်းသိမ်းသလို ၊အိမ်ထောင်တာဝန်ယူလည်းယူထားတယ်။ သားသမီးကိုလည်း စောင့်ရှောက်တယ်။ သားသမီး မြေးမြစ်တွေအထိ ပျော်တပြုံးပြုံနဲ့နေသွားခဲ့တဲ့ အဖိုးအဖွားတို့ ကို ပြန်တွေးရင်း ။
အခုခေတ်မှာ ကျွန်တော်တို့သားသမီး ဘယ်နှစ်ယောက် ယူမလဲ။
ကျွန်တော်တို့သားသမီးတွေရဲ့ နောက် မျိုးဆက်မှာ. . .
နောက်မျိုးဆက်တွေမှာ . . . . . . . .
Previous Postပတ္တမြားမှန်ရင် နွံ့ မနစ်ပါ။Next Postဘာဖြစ်လို့-
One thought on “သားသမီး ရတနာ”
ဒီပို့စ်လေးက အစ်မ ဟိုတစ်လောက တင်ထားတဲ့ ပို့စ်လေးနဲ့ စပ်ဆက်နေလို့ လင့်လေး ပေးလိုက်ပါတယ်။ အဓိကက ကုန်ကျစံရိတ်များလို့ပါ။